Iyo Rainbox Six mutambo uchauya kune nharembozha | Nhau dze iPhone
Iyo Rainbox Six mutambo urikuuya kune nharembozha
Ignatius Room | 06/04/2022 11:00 | IPhone mitambo
Ubisoft, mugadziri wezita rekuti Rainbox Six, mutambo wehunyanzvi hwekupfura, akasimbisa kuti ndizvo. kushanda pane mobile version, zita rinenge riine nzvimbo dzakafanana dzatinogona kuwana mushanduro yePC nemaconsoles.
Sekureva kwaUbisoft, mutambo uyu wakagadzirwa kubva pakutanga tichifunga nezve gameplay inopihwa nenharembozha uye ichave yakagadziridzwa kune yakakura nhamba yemafoni uye mahwendefa. Senge yakawanda yerudzi urwu rwezita, Rainbox Six Nhare icharova pamusika mune yemahara-yekutamba modhi.
Mutambo uchasanganisira voice chat, hurongwa hwekumaka kuzivisa vamwe vatambi vese pasina chikonzero chekutaura, jmuchinjika kutamba pakati iOS uye Android namano uye mamepu achave akafanana neaya anowanikwa muPC uye console version mukurwisana kwe5v5. Mukuwedzera, ichabatanidzawo Safe Area uye Bomb mode.
Sekureva kwaJustin Swan, director director weiyi vhezheni yeRainbow Six yenharembozha:
Mamepu akawanda kana mashoma akafanana, kuparadzwa kwakashandurwa zvishoma uye zvimwe zvinhu zvidiki zvakagadziridzwa.
Inotaura zvakare kuti mamwe maficha akabviswa iyo, nekuda kwekugumira kweiyo touch interface, haigone kushandiswa nenzira imwechete sekutamba paPC kana console.
Shanduro iyi ichasanganisirawo a opareta kiinura kufambira mberi system. Mushure memakore matatu ebudiriro, Ubisoft inobvumira vashandisi vanoda kuyedza iyo alpha vhezheni kusaina kuburikidza neUbisoft webhusaiti.
Pawebhusaiti imwechete iwe unogona kuwana iyo ruzivo rwakawanda-rwe-parizvino nezve zvese zvatichapihwa neiyo vhezheni yeRainbow Six Mobile.
Zvinoenderana ne zuva rekuburitsa, panguva ino hazvizivikanwi, asi zvinowanzoitika kuti ichatangwa pamusika gore risati rapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo Rainbox Six mutambo urikuuya kune nharembozha
iPhone 14: Runyerekupe rutsva rwunonongedzera kukudzikiswa kwemafuremu.
Yekutanga beta yevagadziri ve iOS 15.5 uye iPadOS 15.5 yave kuwanikwa